Ciidamadii Milateriga ee ku sugnaa Gobolka Sh/Hoose oo lagu bedelay ciidamo kale – idalenews.com
Ciidamadii Milateriga ee ku sugnaa Gobolka Sh/Hoose oo lagu bedelay ciidamo kale
Wararka ka imaanaya deegaanada gobolka Shabellaha Hoose ayaa sheegaya Ciidamo Milateri oo ka tirsan guutada labaad ee ciidamada xooga dalka la geeyay, kadib markii la bedelay ciidamadii horay ugu sugnaa.
Ciidamadan ayaa waxaa hogaaminaya Taliyaha Gaaska labaad ee ciidamada xooga dalka Jen. C/llaahi Cagey, iyadoo durba ay ka bilaabeen deegaanada gobolka Howl galo lagu sugayo ammaanka.
Gudoomiyaha Gobolka Shabellaha Hoose C/qaadir Maxamed Nuur (Siidii) ayaa sheegay in ciidamadii hore lagu bedelay ciidamo cusub oo ka tirsan gaaska labaad, isla markaana uu qeyb ka yahay sugida ammaanka.
“Ciidamo Milateri oo ka duwan kuwii hore ayaa la keenay gobolka, waxaana hogaaminaya taliyaha gaaska labaad jen. Cagey”ayuu yiri C/qaadir Siidii.
Gudoomiyaha ayaa sheegay in howl galo shalay laga sameeyay Marka iyo Afgooye lagu soo qab qabtay kooxo dhibaateynayay shacabka, isla markaana ku lug lahaa amni darada.
Maalmihii u dambeeyay ayaa qeybo ka mid ah gobolka Shabellaha Hoose waxaa ka taagnaa dhac iyo kufsi loo geysanayay haweenka, waxaana kooxo ku labisan dareyska ciidamada ay jidka u galayeen gaadiidka safarka ee isaga kala goosha deegaanada gobolkaas.